बेलायतमा पेट्रोलको भाउ ५ वर्षयताकै महँगो Bizshala -
बेलायतमा पेट्रोलको भाउ ५ वर्षयताकै महँगो
काठमाण्डौ । भारतमा पेट्रोलको भाउमा लगातार गिरावट आइरहेकै बेला बेलायतमा पेट्रोलको भाउ ५ वर्षयताकै सबैभन्दा उचाइमा पुगेको छ । बेलायतमा १ लिटर पेट्रोलको १२८.७२पी (नेरु. १७२.१४) पुगेको छ। जब कि भारतमा प्रतिलिटर शुक्रबार भारु ७२.६९ रुपैयाँ (नेरु ११६.६३) पुगेको छ । नेपालमा पनि रु. १०९ रहेको छ ।
ब्रिटिस मिडियाको रिपोर्टअनुसार जुलाई २०१४ पछि बेलायतमा पेट्रोल भाउ यति उचाइमा पुगेको हो । बेलायतमा डिजेलको भाउ अझ महँगो छ । त्यहाँ डिजेल प्रतिलिटर १३१.६१पी (नेरु. १७६) रहेको छ ।
ब्रिटिस पेट्रोलियमका पेट्रोल सबैभन्दा महँगामा बिकिरहेको छ । बेलायतमा तेल मार्केटिङ कम्पनीको संख्या १० को हाराहारीमा छ । जसमा ब्रिटिस पेट्रोलियम सबैभन्दा ठूलो तेल मार्केटिङ कम्पनी हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउमा ६ प्रतिशतभन्दा बढीले गिरावट आएको छ । यसका बाबजुद पनि ब्रेन्ट क्रुडको भाउ ६५ डलर प्रतिब्यारलबाट घटेर ६० डलरमा झरेको छ । ब्रेन्ट क्रुडमा करिब ६ कलर प्रतिब्यारलको गिरावट आएको छ । – एजेन्सी
petrolium price hike in Britain